सुन्दरहरैंचामा भएको मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लेटाङ्ग विजयी! | RatoTara.com Websoft University
सुन्दरहरैंचामा भएको मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लेटाङ्ग विजयी!
मोरङ बैशाख ६ गते । रातो तारा डट कम,सुन्दरहरैंचामा आज शुरु भएको प्रथम सुन्दरहरैंचा मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा लेटाङ नगरपालिका अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्धारित समयमा लेटाङ र बेलबारी नगरपालिका दुवैले कुनै गोल नगरेपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट भएको थियो ।
त्यस्तै, बेलबारीका तर्फबाट टिम क्याप्टेन देवेन धिमाल तथा कासिम राई र मिलन परियारले गोल गरेका थिए । बेलबारीका किरण लिम्बू र अरुण लिम्बूको प्रहार भने लेटाङका गोलकिपर अञ्जित श्रेष्ठले बचाएका थिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच लेटाङ नगरपालिकाको टिमका गोलकिपर अञ्जित श्रेष्ठ घोषित भए । उनले नगद २ हजार र मेडल पाए ।